Aspen iyo Jupiter Login | BGA
ASPEN waa nidaamka macluumaadka rasmiga ah ee iskuulka. Waad la socon kartaa diiwaanka imaanshaha ardaygaaga, waad arki kartaa warbixinada horumarka iyo kaararka warbixinta, waxaadna arki kartaa wixii tilmaam anshax ah. BGA waxay u adeegsataa macluumaadkan inay la xiriirto waalidiinta / mas'uuliyiinta. Fadlan hubi inaad aragto in macluumaadka oo dhami ay cusbooneysiisan yihiin. Si aad u baratid sida loo galo ASPEN, dhagsii xariirka hoose.
Jupiter waa buugga buuggaagta internetka ee BGA. Macallimiintu waxay halkan ku hayaan shaqooyinka maalinlaha ah iyo dhibcaha. Nidaamkan waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa meelaynta dijitaalka / khadka tooska ah. Si aad u aragto ardaygaaga heerka ugu dambeeyay, isticmaal nidaamkan. Si aad uhesho Jupiter, dhagsii badhanka xariirka hoose.
Ardayda iyo waalidiinta waxay geli karaan waqti kasta si ay u eegaan buundooyinka iyo shaqada guriga. Qof walbaa wuxuu leeyahay eraygiisa sirta ah, sidaa darteed qof kale ma arki karo darajooyinkooda, waxayna u baahan yihiin hal gal keliya si ay u hubiyaan casharadooda oo dhan. Tan waxaa ku jira darajooyinka ku saabsan dhammaan meeleynta, kaararka warbixinta, imaanshaha, faallooyinka shaqsiga, iyo farriimaha. Xogta oo dhan si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa, marka macallimiintu uma baahna inay sameeyaan wax dheeraad ah oo ay ku dhejistaan ama ku ridaan buundooyinka. Tani waa ikhtiyaari, sidaa darteed waxaad ku qaadan kartaa qaar ama dhammaan macluumaadka qadka tooska ah.
Soo gal ID
Ardayda iyo waalidiinta waxay soo galaan iyagoo adeegsanaya Aqoonsiga ardayga #, ama waxay si fudud u isticmaali karaan magaca buuxa ee ardayga. (Waxay aqoonsan tahay midkoodna magaca sharciga ah ama magaca la doorbido, sida Michael Smith ama Mike Smith, laakiin ma aha magaca-ugu-dambeeya, sida "Smith, Mike".) Haddii laba arday ay isku magac yihiin, waxay ku heli doonaan midka leh lambarka sirta ee ku habboon. )
Furaha sirta ah ayaa loo sameeyaa arday kasta iyo waalid / xiriir kasta. Marka ugu horreysa ee ay soo galaan, waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay doortaan eraygooda sirta ah oo ay ku galaan macluumaadka xiriirkooda. (Koodhadhka lama bedesho sanad walba, sidaa darteed way sii wadi karaan isticmaalka isla erayga sirta ah.)